Bill Cosby oo lagu xukumay 3-10 sano xabsi ah kadib markii uu kufsay haween… – Hagaag.com
Bill Cosby oo lagu xukumay 3-10 sano xabsi ah kadib markii uu kufsay haween…
Posted on 26 Seteembar 2018 by Admin in fanka // 0 Comments
Mas’uuliyiinta Pennsylvania ayaa galabnimadii Talaadada sii daayay sawir laga qaadey Bill Cosby kadib markii lagu xukumay saddex sano ilaa 10 sano xabsi ah kadib markii lagu helay dambiga galmada.
Sawirka odeyga 81-sano jirka ah oo noqday majaajiliste guul dareystay ma eegayo kamarada, wuxuu indhihiisa u foorariyey dhinaca dhulka.
Cosby ayaa ka ogaaday wuxuu mudan yahay maxkamad ku taal Montgomery County Talaadadii, shan bilood ka dib markii lagu helay dambi ah seddex dacwadood oo ka mid ah inuu daroogeeyey isla markaasina kufsi u geystay Andrea Constand.
Constand, oo aheyd shaqaale hore oo ka tirsan Jaamacadda Temple, ayaa ku tilmaantay Cosby in uu yahay qof khibrad leh oo isticmaalay xidhiidhkooda si uu ugu weeraro gurigiisa oo ku yaal Elkins Park, Pennsylvania, bishii Janaayo 2004.
Cosby ayaa magaciisa soo caan baxay sideetamaadkii qarnigii hore kadib markii uu jilay musalsalkii “the Cosby Show” oo ku jilay aabe reer Mareykan- Afrikaan ah oo ku nool Brooklyn ee magaalada New York. Waxaa markaa kadib loogu magac daray inuu yahay “aabihii Mareykanka”.